एमाले कार्यदलको बैठक आज बस्दै - नेपालबहस
एमाले कार्यदलको बैठक आज बस्दै
| १०:५७:४४ मा प्रकाशित
४ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको विवाद मिलाउन भनी गठित १० सदस्यीय कार्यदललाई तीन दिनको समयसीमा दिइएको थियो । तर कार्यदलको बैठक नै उक्त अवधिमा बस्न सकेको छैन । तीन दिनको समय त त्यसै जाने देखिएको छ–कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका उपमहासचिव घनश्याम भूषाले भनेका छन् । संभवतः आज पहिलो बैठक बस्ने उनले जानकारी दिए ।
गएको आइतवार प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दुबै तर्फबाट पाँच-पाँच जना रहने गरी कार्यदल बनाएका हुन् । उक्त कार्यदलले तीन दिन भित्र रिपोर्ट बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो । तीन दिनको समय खेर गएको छ भन्दै सदस्य भूषालले पहिलो बैठकमा सकेसम्म सबै सदस्यको उपस्थिति रहोस् भनेर बैठक बस्न ढिला भएको जानकारी दिए ।
कार्यदलका एक जना सदस्य शंकर पोखरेल अहिले बुटबलमा रहेकाले बैठक बस्न नसकेको थाहा भएको छ । पोखरेल आजै राजधानी आउने भएकाले साँझसम्म बैठक बस्न सक्ने नेता भूषालले बताए । कार्यदलले काम थालेको तीन दिन भित्रै सम्पन्न गर्ने उनले बताए । खास केही पनि छैन , जेठ २,२०७५ मा फर्कंदा सबै समस्या हल भइहाल्छ, समस्या भनेको माओवादीबाट आएका नेताहरुको व्यवस्थापन मात्रै रहेको उनले बताए ।
नेकपा भित्रको विवादका बेला माओवादीका केही नेताले ओलीलाई साथ दिएका थिए । उनीहरुलाई फागुन २८ गते ओली पक्षले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको थियो । यही नै विवादको जड भएकाले यसको व्यवस्थापन मात्रै गाह्रो रहेको उनले बताए । कार्यदलमा ओलीका तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेम्बाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल रहेका छन् । यस्तै नेपाल पक्षबाट उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव भूषाल,सचिव गोकर्णराज विष्ट र सुरेन्द्र पाण्डे रहेका छन् ।
आँधीखोलाले ‘जाऊ’ हैं अन्धाअन्धी श्रवणकुमार अभियान’ समेट्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक ६ मिनेट पहिले
अग्रणी शक्ति बनाउन महाधिवेशनः अध्यक्ष थापा १८ मिनेट पहिले
टुकोनले श्रममन्त्रीलाई बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र २५ मिनेट पहिले
कोपा अमेरिका २०२१ पनि डिशहोममा प्रत्यक्ष हेर्न पाइने ४९ मिनेट पहिले
माई सेकेण्ड टिचर ‘मेरो डिजिटल नेपाल, मेरो परिकल्पना’ प्रतियोगिता शुरू, उत्कृष्ट ७ लाई २५ हजारदेखि १ लाखसम्मको पुरस्कार ५६ मिनेट पहिले
सोसल मिडिया व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालासँग काउन्सिलको अन्तरक्रिया ३ दिन पहिले
बिर्तामोडमा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई ६ दिन पहिले
छाती दुख्नुको प्रमुख कारणहरु के के हुन ? १ हप्ता पहिले
संवैधानिक ‘कू’ का बिरुद्धमा अदालत र आन्दोलन सँगै अगाडि बढाउछौं : डा. शेखर ४ हप्ता पहिले
आजबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु, साउनदेखि पढाई हुने ५ दिन पहिले
ओलीको पेलानमा परे बादल तर बिद्रोह गर्ने अवस्था छैन ४ महिना पहिले
महराको स्वास्थ्यमा समस्या, शिक्षण अस्पतालमा उपचार हुँदै २ वर्ष पहिले
रुकुमपूर्वमा पति हत्याको आरोपमा एक पक्राउ ११ महिना पहिले
बैतडीमा २२ छात्र र पाँच छात्रा एसइई दिनबाट वञ्चित १ वर्ष पहिले